Iskuxirnaanta Cufnaanta Cufan
Aqoon-isweydaarsiga Wax-soo-saarka & Khadka Wax-soo-saarka
Tan iyo markii la aasaasay 1987, YUFA Group waxay dhistay saldhig wax soo saar oo baaxad leh oo wadar ahaan ka badan 193,000 mitir murabac ah, oo leh wax soo saar sanadle ah oo gaadhaya 25,000 tan. U hoggaansamida ruuxa caqliga in ka badan 30 sano, waxaa naga go'an cilmi baarista iyo horumarinta alaabada taxanaha alumina oo tayo sare leh. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa iskudarsan yihiin corundum cad, aluminium-magnesium spinel la isku daray, corundum cufan oo isku dhafan, corundum crystal single single, iyo calcined α-alumina.
Iyada oo loo marayo kanaalada suuqgeynta ee khadka tooska ah iyo khadka tooska ah, wax soo saarka kooxda YUFA ayaa loo dhoofiyaa in ka badan 40 waddan iyo gobollo ay ka mid yihiin Mareykanka, Jarmalka, Kuuriyada Koonfureed, Japan, Turkiga, Pakistan, iyo Hindiya iwm.
30 + SANNO KHIBRAD
Xeeldheerayaasha alaabada alumina ee kugu hareeraysan, hubinta tayada, taas oo xallin doonta dhibaatooyinka maadooyinka, qalabka diidmada iyo dhinacyada kale ee xirfad ahaan adiga kuu ah.
3 SALO-SOO SAARKA
Soo saar ballaaran, alaabooyin ayaa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha. Iyadoo sanadkiiba la soo saari karo awood dhan 250,000 tan.
ADEEGA AWOOD LEH OO Awood Leh
8 taxane, in kabadan 300 oo alaab ah, waxay taageertaa qaabeynta qaabab kala duwan iyo moodello si loo daboolo baahiyahaaga.
KOOXDA R&D EE XIRFAD LEH
5 R&D xarumaha, xiriirka iskaashi la unugyada cilmi-baarista sayniska, sida Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, iwm Innovation iyo tayada waa yoolalka our joogto ah.
17 foornooyinka dijitaalka ah ee kumbuyuutarka si buuxda otomaatig ah, 2 foornada wareega, 1 godka tunnel iyo 1 saxanka riixida, 2 munaaradood oo lagu riixo cadaadis, 2 baabi'inta iyo qalabka denitration.
100% heerka pass wax soo saarka, 100% heerka pass warshad. Si adag u xakamee tayada alaabta ceyriinka ah illaa sheyga dhammeeyey. Kaliya maahan in la hubiyo tayada, laakiin sidoo kale in la hubiyo xasilloonida tayada.
YUFA Group waxay aad ugu mahadcelineysaa macaamiisha cusub iyo kuwii hore inay u yimaadeen warshada si ay ula xiriiraan una bartaan. Macaamiisha ayaa ka ogaanaya waxyaabaha ka soo baxa YUFA waxayna dareemayaan qaabka & ruuxda YUFA. YUFA waxay soo saartaa wax soo saar tayo sare leh iyo adeegyo tayo sare leh si ay usoo celiso taageerada macaamiisha. YUFA-na waxay si dhab ah ugu noqon doontaa lammaane lagu kalsoonaan karo macaamiisha.
Sannad kasta YUFA wuxuu kaqeybqaadi doonaa bandhigyo kaladuwan oo laxiriira warshadaha gudaha iyo dibada, si firfircoon ubarto una isdhaafsadaan macluumaadka waxsoosaarka kaladuwan, uhormariyo tayada iyo teknoolojiyadda waxsoosaarkayaga, waxaan rajeyneynaa inaan lashaqeyno macaamiil badan oo adduunka oo dhan ah, iyo rajo si loo siiyo wax soo saar tayo fiican leh iyo adeegyo wanaagsan macaamiisha.
No.1 Wanquanhe Road, Degmada Shangjie, Magaalada Zhengzhou, Gobolka Henan, Shiinaha